Izindaba - Uyazi ukuthi yimiphi imithetho yokusebenza okufanele ilandelwe lapho kuqhutshwa iPatch PC patch?
Uyazi ukuthi yimiphi imithetho yokusebenza okufanele ilandelwe lapho kuqhutshwa iPatch PC patch?
Ukunika ulwazi olusha lwe-PCBA! Woza ubuke!
I-PCBA inqubo yokukhiqiza yebhodi elingenalutho le-PCB nge-SMT kuqala bese lifaka i-plug-in, okubandakanya ukugeleza kwenqubo okuhle nokuyinkimbinkimbi nezinye izinto ezizwelayo. Uma ukusebenza kungalinganiswanga, kuzodala inkinga yokulimala noma ukulimala kwengxenye, kuthinte ikhwalithi yomkhiqizo futhi kukhuphule izindleko zokusebenza. Ngakho-ke, ekucutshungulweni kwe-PCBA chip, kudingeka silandele imithetho efanele yokusebenza futhi sisebenze ngokuqinile ngokwezidingo. Okulandelayo isingeniso.
Imithetho yokusebenza kwe-PCBA patch processing:
1. Akufanele kube nokudla noma isiphuzo endaweni yokusebenza kwe-PCBA. Ukubhema kwenqatshiwe. Azikho izibopho ezingahambelani nomsebenzi okufanele zibekwe. Indawo yokusebenza kufanele igcinwe ihlanzekile futhi icocekile.
2. Ekucutshungweni kwe-chipBA ye-PCBA, ingaphezulu elizothambisa alinakuthathwa ngezandla ezingenalutho noma ngeminwe, ngoba igrisi egcotshwe izandla izonciphisa i-weldability futhi iholele kalula ekukhubazekeni kokushiswa.
3. Yehlisa izinyathelo zokusebenza kwe-PCBA nezakhi okungenani, ukuvikela ingozi. Ezindaweni zomhlangano lapho kufanele kusetshenziswe khona amagilavu, amagilavu ​​angcolile angadala ukungcola, ngakho-ke kudingeka ukuthi esikhundleni sombusazwe kudingekile.
4. Musa ukusebenzisa i-grease yokuvikela isikhumba noma okokuhlanza okuqukethe i-silicone resin, okungadala izinkinga ekuthengisweni kwe-solderability kanye nokunamathela okuyimfihlo. Kuyatholakala isepha elungiselelwe ngokukhethekile indawo yokushisela ye-PCBA.
5. Izingxenye ezibucayi ze-EOS / ESD ne-PCBA kumele zikhonjwe ngamamaki afanele we-EOS / ESD ukugwema ukudideka nezinye izinto. Ngaphezu kwalokho, ukuze kuvinjelwe i-ESD ne-EOS engozini yokufaka izinto ezibucayi, yonke imisebenzi, ukuhlangana nokuhlolwa kumele kuqedwe kubhokisi lomsebenzi elingalawula ugesi osendaweni.
6. Hlola ukusebenza kwe-EOS / ESD njalo ukuze uqiniseke ukuthi basebenza kahle (anti-static). Zonke izinhlobo zezingozi zezinto ze-EOS / ESD zingabangelwa indlela engalungile yokubeka phansi noma i-oxide engxenyeni yokuxhuma. Ngakho-ke, ukuvikelwa okukhethekile kufanele kunikezwe ngokuhlanganiswa kwe-"yesithathu wire" yesikhungo sokumisa.
7. kwenqatshelwe ukufaka i-PCBA, ezodala ukulimala ngokomzimba. Amabakaki okhethekile azonikezwa ebusweni bomsangano osebenza bese ubekwa ngohlobo lolo.
Ukuze uqinisekise ikhwalithi yokugcina yemikhiqizo, unciphise ukulimala kwezingxenye futhi wehlise nezindleko, kuyadingeka ukuthi ugcine ngokuqinile le mithetho yokusebenza futhi usebenze kahle ekusebenzeni kwe-PCBA chip.
Umhleli ulapha namuhla. Uyitholile?
IShenzhen KingTop Technology Co., Ltd.